Irlandy dia mety hosaziana onitra noho ny tsy nanangonanao haba amin'ny Apple | Vaovao IPhone
Irlandy dia mety hosaziana onitra noho ny tsy nanangonanao haba amin'ny Apple
Mandritra ny andro vitsivitsy, Mety hiatrika lamandy i Irlandy ho an'ny mbola tsy nanangona ny vola mifanaraka amin'ny hetra ampodin'i Apple.
Araka izany vaovao navoakan'ny media Bloomberg, hanasazy an'i Irlanda amin'ny "fepetra tsy fanarahan-dalàna" i Irlanda noho ny tsy fahombiazany nanangona ny haba mitentina 17.600 miliara $ an'ny Apple, noho ny fehin-kevitry ny Vaomiera fa nifampiraharaha tamin'ny fifanarahana tamin'ny orinasa Cupertino manokana ny governemanta Irlandey izay nanampy ny fanjakana tsy ara-dalàna.
Tsara any Irlandy noho ny tsy fanarahana ny sazin'ny Vaomiera Eoropeana
Ny sazy voalaza dia azo havoaka ampahibemaso raha vantany vao tamin'ity herinandro ity, loharanom-baovao tsy fantatra nambara tamin'i Bloomberg. Ity "refy default" ity dia ho tonga amin'ny fanenjehana izay, raha resin'ny mpandrindra eropeana, dia hiteraka sazy ara-bola izay hampiakatra bebe kokoa ny totalin'ny vola tany am-boalohany.
Tamin'ny 3 Janoary, nampirisihina i Irlandy hanangona hetra amin'ny Apple na izany aza, ny governemantan'io firenena io dia nanohitra an-karihary na ara-dalàna.
Samy niasa tamin'ny fampiakarana raharaha i Apple sy ny governemanta Irlandey. Raha ny filazan'i Irlandy, ny fe-potoana nifanarahana tamin'i Apple dia natao ho an'ny orinasa hafa ihany koa. Amin'ny lafiny iray dia notohizan'ny Apple hatrany fa manaraka tsara ny lalàna isaky ny firenena iasany izy io.
Na izany aza, nanatsoaka hevitra ny Vaomiera eropeana fa izahorlanda namolavola fitsipika namela an'i Apple handoa 0,005% hetra mandritra ny 2014. Ankoatr'izay, ny orinasa dia mivelona amina miliara amin'ny fidiram-bola iraisam-pirenena amin'ny alàlan'ny hetsika Irlandey fa tsy mandoa ny haba mifandraika amin'izany any amin'ny firenena tsirairay izay namoronana ny varotra.
La antso Apple sy Irlandy dia afaka nitatra hatramin'ny dimy taona. Nandritra izay fotoana izay, ny roa tonta dia nikarakara drafitra fitadiavam-bola amin'izay ny governemanta Irlandy dia hiambina ny vola amin'ny fanantenana hamerina izany any Apple raha vao mandresy izy ireo, raha izany no mitranga.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Irlandy dia mety hosaziana onitra noho ny tsy nanangonanao haba amin'ny Apple
Sarimihetsika notifirina tanteraka tamin'ny iPhone no nahazo fanendrena 10 tao amin'ny Festival Festival Taipei
Amin'ny 2 Novambra, Apple dia hanao tatitra momba ny niafaran'ny fizarana ara-bola farany